करिश्मा बिष्ट अब ‘हास्य टेलिशृंखला’ मा पनि ! [भिडियोसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
करिश्मा बिष्ट अब ‘हास्य टेलिशृंखला’ मा पनि ! [भिडियोसहित]
काठमाडौं, कार्तिक १३ । नेपाल आइडल सिजन-२ बाट चर्चामा आएकी कैलाली अत्तरियाकी करिश्मा बिष्ट ‘हास्य टेलिशृंखला’समेत देखिएकी छन् । उनी हास्य टेलिशृंखला ‘खुल्दुली’मा देखिएकी हुन् ।
यो सिरियलमा करिश्माले आ्नो चर्चित र्याप ‘इको नि लाग्यो, गणित नि लाग्यो…’ गीत गाएकी छन् । र, अन्य सदस्यलाई पनि सिकाइरहेको भूमिका उनी देखिन्छन् । बाँकी हेर्नुस् उनको प्रस्तुती भिडियोमा-
याे पनि पढ्नुस जब रवि त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिए, यस्तो बन्यो माहोल ! [भिडियोसहित]
ट्याग्स: Karisma Bist, nepal idol